Amaqhinga ama-5 okufumana ingqalelo kwiWebhu | Martech Zone
Amaqhinga ama-5 okufumana ingqalelo kwiWebhu
NgoLwesibini, Septemba 16, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Isenokuba sisithuba esothusayo sinikwe inyani yokuba ibhlog yam yehle kancinci ekufundeni. Inyani yile ndiyazi ukuba ibangelwa yintoni, kodwa andinalo ixesha ngoku lokutyala imali ukuyiphelisa. Akukho zinkxalabo, nangona kunjalo, ndiza kuyiguqula kungekudala!
Ngale nto, bendicinga kakhulu malunga nokuba zeziphi iindlela ezinokuthi zithathwe ziinkampani kunye nabantu ukuze baqwalasele oontanga babo, amathemba, kunye / okanye abathengi kwiwebhu kwaye ndiyinciphisile kwaba 5. Ezi zicwangciso zinokuthi gxothwa ngexesha elinye, konke ngaxeshanye, okanye ungakhetha eyiphi indlela oza kuyithatha.
Yiba mnandi -Ndicinga ukuba ndinoburharha kodwa ukuguqula uburharha kwiwebhu kunokuba nzima, nokuba bubundlongondlongo. Ukuba ungayikhupha, uphumelele.
Yimangalisa - Xelela wonke umntu ukuba unjalo ungabhengezi kwakhona… Kwaye ulandele kunye 3 ezinye izithuba kunye nokuya kwiWindowsPress. Huh? Ewe, nam andiyiqondi kodwa ifumene wonke umntu kumnatha othethayo.
Yiba krelekrele - Nantsi lapho ubomi obukrelekrele phaya… Nkqu nakwibhlogosphere. Ezinye zezona zinto zilandelayo zilandelwe iziza ezibonelela ngomxholo oxhokonxa iingcinga kunye nengxoxo-mpikiswano ekrelekrele- kunye nezibakala zokuyixhasa.
Yiba ngaguquguquki -Ukuba uza kukhetha isihloko, siveze ngokungaguquguqukiyo kokubini ukuboniswa kunye nexesha. Zimbalwa kakhulu iisayithi ezenza oku, kubandakanya neyam. Ifuna ukuzinikela (umlutha?), Ukuzingisa, kunye nomnqweno wokungaze uzincame zombini umgangatho kunye nexesha. Sisenzo esinzima ukulandela.
Yiba kuyo yonke indawo - Abanye abantu abayeki uyasebenza! Ndiyakholelwa okuninzi koku kulandelayo bendikhe ndakwenza kwindawo yam kukuqhubeka nokuncokola kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo kunye neeblogi kwiwebhu yonke. I-Intanethi iyabavuza abantu iiyure ezininzi kunye nokusebenza nzima.
Bhatala ngendlela yakho -Ukuba uyonqena, ungachitha inyanda kwizibhengezo nakwiAdense. Ukuba ulungile ngenene, unokufumana iindlela zokutyala imali kwishishini lakho elahlukileyo kwaye elinembuyekezo enkulu kutyalo-mali. Ukunika ingqalelo iisayithi enza imali ikwabonelela ngokuqonda okukhulu ngendlela yokuchitha.
tags: ingqalelocalacanisfumana ingqaleloqaphelaUJohn chowirobob scobleshoemoneytechcrunchizihloko
Faka endaweni yokuKhangela kweWordPress ngokuKhangela kuGoogle okuCwangcisiweyo
Sep 17, 2008 kwi-12: 19 AM
Oko kwenza ezintandathu akunjalo? Ndiza kuphinda ndifunde ngenyameko phofu anyway
Sep 17, 2008 kwi-11: 45 AM
Uneliso elibukhali, Otir! Ndizabalazile nyani ngokuthenga indlela yakho njengesicwangciso kwaye ndiyongeze ngomzuzu wokugqibela. 🙂
Sep 18, 2008 kwi-7: 54 AM
Enkosi kakhulu malunga neengcebiso, ziluncedo kakhulu,
Ndifuna nje ukuthi ukubhloga kwemali kuye kwaba nzima kwezi ntsuku kuba amaqhinga amadala awasasebenzi kum.
Enkosi ngokwabelana nathi ngezi ngcebiso (kunye nezinto ezintle nazo).
Sep 19, 2008 kwi-9: 43 AM
Hayi, Ndiyahlekisa!. Kwaye ndilumkile kwaye andiguquki. Kwaye ngelixa ndingekho kuyo yonke indawo, ndikwenye indawo. Ke i-3.5 ngaphandle kwe-6 ayibi kakhulu.
Ngokuqinisekileyo ngekhe ndizame ukubhloga ngemali, ikakhulu kuba andifuni ukubeka ixesha kunye nomzamo kuyo. Ndiza kusebenzisa ibhlog yam ukuthengisa incwadi yam nangona, xa ndinokushicilela into esisidenge.